MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward JOOX - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » MPT JOOX Data Pack
MPT JOOX Data Pack
JOOX Data Pack တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူတိုင်းဌားရမ်းခအခမဲ့ဖြင့်JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်ပါ ရရှိမည့် Data Pack ကို MPT မှာ ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ၀ယ်ယူထားသော JOOX ဒေတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယခုအချိန်မှစပြီး အနှစ်သက်ဆုံး မြန်မာသီချင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာသီချင်းများကို အသက်သာဆုံး နှုန်းထားဖြင့် JOOX App ပေါ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိ နားထောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အခုပဲ JOOX VIP Music Pack ဝယ်ယူလိုက်ပါ
MPT JOOX Data Pack ကို သုံးမျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(၁) ရက် JOOX Data Pack (၇) ရက် JOOX Data Pack (၃၀) ရက် JOOX Data Pack
တန်ဖို: ၁၂၉ ကျပ် ၄၅၉ ကျပ် ၈၀၀ကျပ်
ရရှိနိုင်မည့် Data ပမာဏ 120 MB 350 MB 500 MB
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ၃၀ ရက်
ခေါ်ဆိုဝယ်ယူရန် *8003*1# *8003*7# *8003*30#
အထူးအစီအစဉ် JOOX VIP access
JOOX VIP တွင် ပါဝင်သောအစီအစဉ်များ
JOOX App တွင်သာ နားဆင်နိုင်သည့် သန်းပေါင်းများစွာသော မြန်မာသီချင်းများနှင့် နိင်ငံတကာသီချင်းများ
အချိန်နေရာမရွေး မည်သည့် တေးသံရှင် ၏ တေးသီချင်းမျိုးမဆို နားဆင်နိုင်ခြင်း
ကြော်ငြာမပါဘဲ သီချင်းများကို စိတ်ကြိုက်နားဆင်နိုင်ခြင်း
အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်းများကို App ထဲတွင် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားပြီး အင်တာနက်မလိုဘဲ နားထောင်နိုင်ခြင်း
စိတ်ကြိုက် playlist ပြုလုပ်နားဆင်နိုင်ခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကောင်းမွန်သော အသံစနစ်ဖြင့်နားဆင်နိုင်ခြင်း
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
MPT JOOX Data Pack ကို JOOX VIP နဲ့ အတူ ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။
အဆင့် (၁)– ၁ ရက် JOOX DataPack (သို့မဟုတ်) ၇ရက် JOOX Data Pack (သို့မဟုတ်) ၃၀ရက် JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် *8003# ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂)– ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက Regular data ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်အတွက် link ကို စာတိုဖြင့် လက်ခံရရှိပါမည်။
အဆင့် (၃) – လက်ခံရရှိထားသော စာတိုထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် JOOX App သို့ ဝင်ရောက်၍ JOOX အထူးသုံးစွဲခွင့်ကို ရယူကာ အနှစ်သက်ဆုံး ပြည်တွင်းပြည်ပ သီချင်းကောင်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
Receive Bonuses with Happy Friday
*555# ကိုခေါ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ 1 Kyat/MB ၈၉ ၉ ကျပ်မှ စတင် ပြီး နေ့စဉ်မတူညီတဲ့ အပိုလက်ဆောင်တွေကိုရရှိမှာနော်။
More Data Offers>>>>
Base Tariff အသုံးပြုသူများနှင့် CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဝယ်ယူထားသော ဒေတာကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဝန်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများသည် JOOX Data Pack ကို တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူလျှင် ဒေတာပမာဏ 120 MB (တစ်ရက်စာ) သို့မဟုတ် 350 MB (ခုနှစ်ရက်စာ) သို့မဟုတ် 500 MB (ရက် ၃၀ စာ) နှင့် ဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာ သက်တမ်းနှင့် ညီမျှသည့် JOOX VIP code တစ်ခု ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူထားသော Data Pack အသုံးပြုပြီးနောက် (သို့) သုံးစွဲနိုင်သော ဒေတာသက်တမ်း ကျော်လွန်ပြီးနောက်တွင် ဝယ်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
JOOX Data Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်သတ်မရှိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အသစ်ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်သော JOOX Data Pack မှ ဒေတာများနှင့် လက်ကျန်ရှိနေသော JOOX ပတ်ကေ့ချ် ဒေတာ ပမာဏများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော ပတ်ကေ့ချ်သတ်တမ်းအတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
JOOX Data Pack ဝယ်ယူသုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် MPT မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၁။ JOOX Data Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
JOOX Data Pack သည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ၁ရက်စာ Daily Data Pack၊ ၇ရက်စာ Weekly Data Pack နှင့် ၃၀ရက်စာ Monthly Data Pack တို့ကို ဝယ်ယူလိုက်ရုံနဲ့ မည်သည့်အခကြေးငွေမှ ထပ်မံပေးဆောင်စရာ မလိုပဲ JOOX VIP 1 day ၊7days and 30 days တို့ကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ သီချင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ သီချင်းများကို JOOX App ပေါ်တွင် မိမိတို့စိတ်ကြိုက် နားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်ခု ရှိပါသလဲ? သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား သုံးမျိုး ရှိပါသည်။
• ၁ ရက်အတွင်း ဒေတာပမာဏ 100 MB အသုံးပြုနိုင်သော Daily Data Pack
• ၇ ရက်အတွင်း ဒေတာပမာဏ 350 MB အသုံးပြုနိုင်သော Weekly Data Pack နှင့်
• ရက် ၃၀ အတွင်း ဒေတာ ပမာဏ 500 MB အသုံးပြုနိုင်သော Monthly Data Pack ဆိုပြီး အမျိုးအစား သုံးခု ရှိသည့်အတွက် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၃။ JOOX Data Pack ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
USSD Code အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူခြင်း
အဆင့် (၁) – USSD Code နံပါတ် *8003# ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်) Daily Data Pack အတွက် *8003*1#(သို့မဟုတ်) Weekly Data Pack အတွက် *8003*7# (သို့မဟုတ်) Monthly Data Pack အတွက် *8003*30# ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂) – ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသော ဒေတာ နှင့်တကွ JOOX VIP အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃) ပေးပို့သော SMS ထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် JOOX Music Application သို့ ဝင်ရောက်ကာ မြန်မာ သီချင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ သီချင်းများကို စိတ်ကြိုက်ခံစားနားဆင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၁) MPT4U App ထဲသို့ ဝင်၍ ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်းကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂) ထို့နောက် JOOX Data Pack တွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသော ဒေတာ နှင့်တကွ JOOX VIP အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ JOOX VIP ရယူခြင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးသွားသော်လည်း VIP ဖြစ်ကြောင်း မမြင်ရသေး ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။
တစ်ခါတရံ VIP ဖြစ်ကြောင်း မြင်ရရန် အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်း ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ JOOX Data Pack ဝယ်ယူပြီးနောက် JOOX Music Application တွင် ရှိသော မြန်မာ သီချင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ သီချင်းများကို နားဆင်ရန် အခကြေးငွေပေးရဦးမှာလား။
အခကြေးငွေ ထပ်မံပေးစရာ မလိုပါ။ JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူပြီး ရရှိလာသော ကုဒ်ကို JOOX Music Application တွင် ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ မြန်မာ သီချင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ သီချင်းများကို တစ်ဝကြီး နားဆင် ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဒေတာအသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူထားသော JOOX Data Pack မှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာများ ကုန်ဆုံးသွားသောအခါ အခြားဝယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၆။ JOOX Music Application ထဲရှိ သီချင်းများကို နားဆင်ရန် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာရှိပါသလား?
နားဆင်နိုင်သည့် သီချင်းအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
၇။ JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် ရှိပါသလား?
JOOX Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် မရှိပါ။ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ JOOX Data Pack တစ်ခုထက် ပို၍ ဝယ်ယူမည် ဆိုပါက ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရရှိထားသော Pack များ၏ စုစုပေါင်း ဒေတာပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းကာလကတော့ နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော Pack ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ရက်အတိုင်း သတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ JOOX Data Pack Data Quota 100 MB (သို့မဟုတ်) 350 MB (သို့မဟုတ်) 500 MB ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် သီချင်းများ ဆက်လက်နားဆင်နိုင်ပါသလား?
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာပမာဏ ကုန်ဆုံးသွားပါက လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၉။ JOOX Data Pack ကို Facebook နှင့် YouTube တို့ အတွက်ရော သုံးလို့ရပါ သလား။
အသုံးပြု၍ ရပါသည်။ JOOX Data Pack ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၀။ JOOX Music Application ကို ဘယ်လို Download လုပ် ရပါမလဲ။
JOOX Music Application ကို Google Play Store နဲ့ Apple iTunes Store တို့မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ သီချင်းတွေကို App အပြင်ဘက်ကို Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
သီချင်းတွေကို JOOX Music Application ထဲတွင်သာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အင်တာနက်မလိုဘဲ App ကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည် နားဆင်နိုင်ပါသည်။
၁၂။ ရရှိထားသော Link ဖြင့် JOOX VIP ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍မရပါ။ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲ?
ပထမဦးစွာ JOOX App ကို ဖုန်းထဲတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး Sign in ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။JOOX VIP Music Pack ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ပြုလုပ်ပါ။
စာတိုပေးပို့ထားသော Link ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါ။
Open JOOX ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Ok ကို click နှိပ်၍ JOOX VIP သို့ဝင်ရောက်ပါ။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ရှင်းလင်းမှုမရှိပါက Customer Support သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
• ဒေတာ မရရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) Link မရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိပါက 106 သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
• JOOX App (သို့မဟုတ်) JOOX VIP ရယူခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ အခက်အခဲရှိပါက JOOX Myanmar Facebook တွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။